पार्टी सभापतीलाई समेत अन्तरघात गर्ने, स्वइच्छाचारी प्रवृति हाबी भयोः युवा नेता लामिछाने | KTM Khabar
२०७४ जेष्ठ २२ गते १०:११ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । गत बैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानिय निकायको चुनावको महोल अझै सेलाई सकेको छैन । मत परिणाम आएसंगै जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न थाली सकेको अवस्था एकातिर छ भने, अर्को तिर चुनावमा पछाडि पर्ने पार्टीहरु त्यसको समिक्षा गर्नमा ब्यस्त छन् । काठमाण्डौ महानगरपालिकामा एमालेले मेयर सहित अधिकांश वडामा जित हाशिल गरेको अवस्थामा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस केही पछाडि परेको छ । यसै पेरिफेरीमा रहेर नेपाली कांग्रेसका पुर्व महासमिति सदस्य तथा युवानेता श्रीराम लामिछानेसंग केटिएम खवरका लागि रवि भट्टराईले विशेष भिडियो संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
यहालाई स्वागत छ
तपाई नेपाली कांग्रेको राजनीतिसंग केन्द्रित रहने मान्छे, केमा ब्यस्त हुनुन्छ ?
अहिले भर्खर चुनाब सकिएको छ । त्यस्तो खासै ब्यस्त पनि छैन तर अन्य प्रदेशमा चुनाव हुदैछ । त्यसमा पनि हाम्रै संगठनका साथीहरु चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुसंगको भेटघाट अनि भर्खर सकिएको चुनावमा जतिले जित्नुभएको छ । ऊँहाहरुसंग अन्तरक्रिया भेटघाट एकातिर छ भने हारेका साथीहरुको एक खालको गुनासोहरु सुन्ने तथा भेटघाट गर्ने कार्यमा नै ब्यस्त छु ।
काठमाण्डौ माहानगरमा र अन्य जति ठाऊमा चुनाव भयो, नेपाली कांग्रेस पछि पर्यो, जनताले मन जित्न नसकेको हो ?
हाम्रो पक्षमा रिजल्ट आएन भन्ने कुरा चाहिँ हैन । यसलाई यसरी नबुझि दिनु होला तर तपाईले भने जस्तै अधिकांश ठाऊमा चुनाव जित्नु पर्ने थियो । त्यो चाहिँ जितेनौ । हाम्रा केही कमीकमजोरीहरु पक्कै भएका छन् । जनताले हामीलाई मन नपराएको हुदै हैन । कांग्रेस पार्टिलाई जनताले मन नपराउने कुरै आउदैन तर जति ठाउँमा हामी हार्यौ मलाई दुईटा कुरा प्रमुख जस्तो लाग्छ । एउटा कुरा हाम्रो केन्द्रले गर्दै गरेका निर्णयहरु जस्तै शुसिला कार्कीको महाअभियोगसंगसंगै आईजिपी प्रकरण तथा राजदुत नियुक्तिसम्मका कुराहरु जुनरुपमा बजारमा आए त्यो जनताले नियाली रहेका थिए । त्यसलाई हामीले वुझाउन सकेनौ र त्यो पपुलर मत हामीलाई नआएकै हो । महाअभियोग पनि के कारणले ल्याएको हो ? भन्ने कुरा जनतालाई हामिले वुझाउन सकेनौ र आईजीपी प्रकरण पनि वुझाउन नसकेको नै हो । जुन रुपमा कार्यपालीका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिका विचको अन्तरसम्वन्ध र तिन वटा संबैधानिक निकाय विचको स्वायत्तता मिचिदै गएको कुरा पनि हामीले जनतालाई वुझाउन सकेनौ, यो पहिलो कुरा हो । दोस्रो कुरा पार्टीको आन्तरिक ब्यवस्थापन यस पालिको चुनावमा फिटिक्कै गर्न नसके कै हो । पार्टी स्वइच्छाचारी ढङ्गबाट चल्यो । बिष बर्ष पछि भएको स्थानिय निकायको चुनाबमा आकांक्षीहरुको लामो लिष्ट हामीसंग थियो । यद्यपी टिकट पाउने एक जनाले हो र टिकट पाउँदै गर्दा असन्तुष्टि जनाउनेहरु धरै भए । ऊनीहरुलाई सम्वोधन गर्न पनि सकेनौ र नियन्त्रण गर्न पनि सकेनौ । उहाहरु स्वइच्छाचारी तवरबाट पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई असहयोग खुलेआम गर्न थाल्नु भयो । संस्थागत निर्णयलाई गलहत्याएर खुलेआम हिडेको देखियो ।
पार्टीको केन्द्रबाट अलोकप्रिय निर्णयहरु भए भन्न खोज्नु भएको हो ?
त्यस्तो हैन । अलोकप्रिय लोेकप्रिय आफ्नो ठाऊमा छ । त्यो समयले विश्लेषण गर्दै जानेछ तर जनतालाई के कारणले यस्ता निर्णयहरु गर्दैछौ भन्ने कुरा बुझाउन हामीले नसके कै हो र यो कुरालाई विपक्षी साथीहरुले क्यास गर्नु भयो । अर्को तर्फ टिकटको सवालमा संस्थागत निर्णय नहुन्जेल छलफल वादविवाद गर्न पाईन्छ तर जव पार्टीले निर्णय गरी सकेपछि पार्टीले टिकट दिईसके पछि स्वइच्छाचारी तरिकाबाट मान्दिन भन्नु असहयोग गर्नु र भोट नहाल्नु भनेको त घात गर्नु हो र घातको प्रतिफल राम्रो नआउने नै भयो ।
तपाईको पार्टी पछाडि पर्नुको कारण आन्तरिक नै रहेछ उसो भए ?
मैले अघि नै भनि सके जो पपुलर मत थियो त्यो लिन सकेनौ र पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह पनि ब्यवस्थापन गर्न सकेनौ । पार्टी भित्रको स्वइच्छाचारी प्रबृति रोक्न सकेनौ त्यो नसकेकै हो । त्यसका बाबजुद पनि हामी धेरै पछाडि छैनौ र हामी कमजोर हुदै हैन अझै चार वटा प्रदेशको चुनाब पनि बाकि नै छ । अझ मजवुद भएर आउने छौ ।
काठमाण्डौको कुरा गर्ने हो भने तपाईहरुका आँकलन फेल खाए कै हुन, सोचे अनुरुप सिट हाशिल गर्न सक्नु भएन ?, खास कारण के रहेछ ?
सोचे अनुुसार ल्याउन नसकै हो यो नतिजाले भनि सकेको छ । यसको कारण मैले भनि सके पार्टी भित्रको स्वइच्छाचारी प्रवृति । मैले भन्नै पर्ने हुन्छ काठमाण्डौ महानगरका जनता नेपाली कांग्रेस कै पक्षमा थिए । उत्साहपुर्वक सहभागिता पनि रहेको थियो तर त्यसो हुदाहुदै पनि अघि भनेकै दुइ कुरा आकर्षित हुन्छ र विशेष चाहिँ हामीले पार्टीभित्रैको आन्तरिक ब्यवस्थापन साङ्गठनिक ब्यवस्थापन गर्न हामी चुक्यौ र एउटा ठुलो तप्का पार्टीलाई असहयोग गर्न लाग्यो । तपाईलाई बताऊ काठमाण्डौ भनेको आदरनीय नेता गणेशमान सिंह जसले ४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो । ऊहाँको जन्मथलो र कर्म थलो हो । तपाईले काठमाण्डौलाई बुझ्दा पछाडि पनि फर्केर हेर्नु पर्ने हुन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव लड्दै गर्दा जुन तरिकाले उहाँलाई हराउन लागे तिनै प्रवृतिहरु अहिले सक्रिय भएर हराउन लागे जस्तो देखिन्छ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा गणेमानजीले २०४६ पश्चात दुइ वटा कुरा उठाउनु भएको थियो । एउटा जातिय रुपमा मुलुकलाई सन्तुलनमा लिएर जानु पर्छ, अर्को आर्थिक क्रान्ति गर्नु पर्छ भन्दै गर्दा जुन रुपमा जातिय सन्तुलनका कुरा गर्दा उहाँका बिरुद्ध काठमाण्डौका केही आफुलाई बौद्धिक भन्ने, आफुलाई प्राध्यापक भन्ने र आफुलाई उच्च स्तरको राजनितिज्ञ भन्नेहरुले नै त्यति बेला गणेमानले बाहुनवाद बिरुद्ध जेहाद छेड्यो भनेर आरोप लगाईयो । हो, तिनीहरु नै हुन, जुन पार्टी भित्र एउटा स्कुल खोलेर बसेका छन र त्यो स्कुल भनेको के हो ? भन्ने पार्टी भित्र पार्टी सभापतीलाई नै नछोड्ने अन्तरघात गर्ने । त्यो स्कुलमा पढ्नेहरु नै पार्टीको आधिकारीक निर्णयको बिरुद्ध जाने र बखेडा श्रृजना गर्ने मैले वडासम्म पाएको छु ।
लोकपृय मत ल्याएर जितेका सांसद गगन थापाको क्षेत्रमा पनि तपाईहरु कमजोर देखिनु भयो ?
वास्तबमा ठिक भन्नु भयो । यो गगन थापाको क्षेत्र हो र यहा धेरै भन्दा धेरै विकास निर्माणका कार्यहरु पनि भएका छन । यो हुदा हुदै पनि हामी हार्यौ । हामीले स्विकार गर्नै पर्छ । विकास निर्माण र संगठनलाई हामीले संगसंगै लिएर हिड्न सकेनौ । यसमा गगन थापम ज्युको पनि कमि कमजोरी होला । पार्टीको जिम्मेवार निकायकामा बस्ने देखि ईकाईसम्मको कमिकमजोरी होला । हामीले गगन थापाले जुन मत ल्याउनु भएको थियो त्यसलाई आधार नमानी त्यो भन्दा अगाडि सुप्रभा घिमिरेले जुन मत ल्याउनु भएको थियो । सुप्रभा घिमिरे त जनताले चिनेकै मान्छे हैन तर जुन उहाँले ल्याए जति मत पनि हामीले सेक्युयर गर्न नसकेको अवस्था छ । कारण हामीले विकास र संगठनलाई संगसंगै लैजान नसके कै हो ।
चुनाबमा आन्तरिक रुपमा असहयोग गर्नेहरुलाई कार्बाही गर्नुहुन्छ कि त्यति कै छोड्नु हुन्छ ?
कार्बाही हुनुपर्छ । हामी लागि रहेका छौ । मैले फेरी भन्न चाँहे हिजो किसुनजीलाई अन्तरघात गर्न जसरी लागेक थिए । गणेशमानजीले जातिय सन्तुलन मिलाउनु पर्छ भन्दा गणेमानले बाहुनवाद बिरुद्ध जेहाद छेड्यो भनेर जो लागेका थिए तिनै ब्यक्तिहरु ६२, ६३ को आन्दोलनताका तिनै कुरा समातेर नेता भएका छन् । ति मान्छेको प्रवृति अझै सचिएको छैन र त्यो नसचिएसम्म तिनिहरुलाई नसियत नदिएसम्म काठमाण्डौको संगठन ठिक हुन सक्दैन । मैले काठमाण्डौको पुर्व सभापति भिमसेन दास प्रधानजीको अन्तरवार्ता अनलाईन तिर पढेको थिए कसको कारणले चुनाव हार्यो ?, कसको कारणले हारेन ? भनेर अरुलाई दोष दिदै हुनुहुन्थ्यो । टोखा नगरपालीका, ताराकेश्वर नगरपालीमा कसका कारणले हार्यो ? किन हार्यो ? भन्ने विश्लेषण नगरी ब्यक्तिगत आक्षेप लगाउने । हिजो देखि विरोधको शैली, गणेशमानजीको घर, गणेशमानजीको परिवार, उहाको विचारलाई यताकता विरोध गर्ने लत्याउने शैली किन गरिदै छ । यो गलत प्रवृति हो ।
समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ।